विशेष उदयपुरमा वाम गठबन्धन बलियो, यस्तो छ अंकगणित
Ujyaalo बुधवार, मंसिर ६, २०७४ १९:५७:००
उदयपुर, मंसिर ६ – स्थानीय तह चुनावको परिणामलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषण गर्दा उदयपुरमा बाम गठबन्धन बलियो देखिएको छ । आउँदो मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि स्थानीय तह चुनावमा खसेको मतका आधारमा त्यस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको हो ।
यस जिल्लामा स्थानीय तह चुनावमा १ लाख ७५ हजार ४६१ मतदाता रहेकोमा ७० प्रतिशत भन्दा बढीले मतदानमा भाग लिएका थिए । यस जिल्लामा प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दुई र प्रदेशसभाका लागि चार निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन् । मंसिर २१ गते दोस्रो चरणको चुनावका लागि वाम गठबन्धन पश्चात चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारको उपस्थिति र स्थानीय तह चुनावमा प्राप्त मतलाई आधार मान्दा दुवै क्षेत्रमा वाम गठबन्धन धेरै बलियो देखिएको छ ।
उदयपुरको निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा स्थानीय तहको चुनावमा १ लाख २ हजार ४०८ जना मतदाता रहेको थियो भने अहिले नयाँ थप भएका मतदातासमेत गरी कुल मतदाता संख्या एक लाख १४ हजार ५९१ पुगेको छ । चुनावी मैदानमा वाम गठबन्धनबाट एमालेका मन्जुकुमारी चौधरी र नेपाली कांग्रेसबाट डा. नारायण खड्काबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।
स्थानीय तहको चुनावलाई आधार मान्दा उदयपुर क्षेत्र नं. १ मा एमाले २४ हजार ५१६ मत प्राप्त गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले २४ हजार ४३१ मत प्राप्त गरेको थियो ।
स्थानीय तह चुनावमा एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले १६ हजार २०६ मत, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले एक हजार ४०४ मत, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ३६९ मत, नयाँ शक्ति पार्टीले १२४ मत र राप्रपाले ९२५ मत पाएको थियो । स्थानीय तहको नतिजालाई आधार मान्दा उदयपुर क्षेत्र नं १ मा माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको मत नै वाम गठबन्धनको जितको आधार हो । वाम गठबन्धनको पक्षमा ४० हजार ७२२ मत देखिन्छ । जुन नेपाली कांग्रेसले पाएको मतभन्दा १६ हजार २९१ मत बढी हो । तर यस जिल्लामा संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपा एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा ७९ हजार ३२७ मतदाताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिने छन् । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनबाट माओवादीका सुरेश राई (हिमाल) र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नारायणबहादुर कार्कीबिच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
स्थानीय तह चुनावमा उदयपुर २ बाट नेपाली कांग्रेसले १३ हजार ९२५ मत पाएको थियो भने नेकपा एमालेले १६ हजार ६४८ मत ल्याएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस भन्दा एमाले दुई हजार ७२३ मतले अगाडि देखिन्छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले १२ हजार ५५९ मत र अन्य साना दलमा संघीय समाजवादी ४३१, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक ६८, राप्रपा १४६ र नयाँ शक्ति नेपालले ४४ मत ल्याएको जिल्ला निर्वाचनको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
स्थानीय तह चुनावको परिणामलाई आधार मान्दा यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनको पक्षमा २९ हजार २०७ मत खसेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिक र नयाँ शक्तिको मत जोड्दा १४ हजार ३७ मतको प्राप्त हुने देखिन्छ ।
स्थानीय तहको मत परिणामलाई विश्लेषण गर्दा यस जिल्लाको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा वाम गठबन्धन बलियो देखिन्छ ।